Land for Sale in Bahan - Yangon Region | iMyanmarHouse.com
Lands for Sale in Bahan
ဗဟန်း ရွှေတောင်ကြား kanbawza လမ်းသွယ်ရှိ မြေကွက်အမြန်ရောင်းမည်။(11000)Sqft
Ad Number S-10040999
🌲အနောက်ရွှေဂုံတိုင်လမ်းမကြီးပေါ်ဗဟန်း 🌲ပေအကျယိ(45×110)(မြေ)(ဂရအမပ) 🌲အရောင်းဈေး(30000)Lsရောင်းမည်။ ...
Ad Number S-10033259
Ad Number S-10022092
Ad Number S-10019477
Alpha Real Estate Close
Ad Number S-10013998
Ad Number S-10010457
Ad Number S-10004004
သာယာဝတီလမ်းပေါ် အရောင်း (ဆရာစံလမ်းအနီ တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းအနီး)
Ad Number S-10002498
တိုင္းလံုးေက်ာ္ (အိမ္ ၊ၿခံ ၊ေျမ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း) Close
(30'x80')အကျယ်၊ ဗဟန်း၊ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်းမ၊ Excel Hotel ရှေ့နား ရွှေဂုံတိုင်အနီး နေရာကောင်း...
Ad Number S-9999323
Baw Di Yeik Thar Lan Land For Sale
Ad Number S-9998057